अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार आज पनि हुन सकेन, के यसमा पनि ठुला लगानिकर्ताको हात छ त ? - E-BreakingNews
Home Karobar अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार आज पनि हुन सकेन, के यसमा पनि ठुला लगानिकर्ताको हात छ त ?
अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार आज पनि हुन सकेन, के यसमा पनि ठुला लगानिकर्ताको हात छ त ?
नेप्सेमा आज बिहिबार पनि अजोड इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार हुन सकेन । श्रावण १३ गते, मंगलबारबाट कारोबार हुने गरी सूचिकृत भएको उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनी शेयर प्रि ओपनिङ्ग सेसनमा कारोबार नभएकाले हालसम्म पनि कारोबार हुन नसकेको हो ।
आईपीओको पहिलो कारोबार प्रि– ओपनिङ सेसन मार्फत हुने व्यवस्था छ । प्रि– ओपनिङ सेसनमा कारोबार भई ओपनिङ प्राइस तय भएपछि मात्र निरन्तर कारोबार सत्रमा कारोबार हुने व्यवस्था बमोजिम उक्त कम्पनीको शेयर कारोबार हुन नसकेको हो ।
उक्त कम्पनीले संस्थापकतर्फको ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण तर्फको ३० प्रतिशतका दरको रू. १ अर्ब बराबरको १ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत गराइसकेको छ ।
नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि रू.८७ देखि रू. २९१ सम्मको सीमा प्रदान गरेकोमा सोहि सीमाभित्र रहेर प्रि–ओपनिङ सेसन मार्फत खरीद आदेश प्राप्त भएपनि विक्री आदेश नापेको हुनाले आज (बिहीवार) पनि कारोबार हुन नसकेको नेप्सेले बताएको छ ।
यो पनि, आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्था र चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जर मा गएपछि साबिकका शेयरधनीलाई अभौतिक रुपमा शेयर जम्मा गरिएको छ ।
आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट शेयरधनीको डिम्यात खातामा अभौतिक शेयर जम्मा गरिदिएको कम्पनीले जनाएको छ । आरम्भ लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त १:१ को अनुपातमा गाभिएका छन् ।
मर्जरपछि आरम्भ चौतारी लघुवित्तको नामबाट असार २२ गते देखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका थिए । रासस